Wufuud Booqday Madaarka Burco Iyo Dhaqaale La Soo Gaadhsiiyay | Somaliland.Org
Bixinta lacagtan ayaa waxa goob-joog ka ahaa gaasimaha guud ee Wasaaradda duulista hawadda Axmed Dalal Faarax ,agaasimaha waaxda duulista Mr ,Saqiiro badhasaabka gobolka Togdheer Cabdoo Axmed Aayar ,masuuliyiinta degmadda Burco ,gudiga dib u dhiska madaarka Burco iyo madax kale oo ka kala socotay qaar ka mid ah hay’adaha caalamiga ah iyo kuwa maxaliga ah .
Geesta kale masuuliyiintan wasaaradda duulista ka socday iyo Shan hayadood oo ay horkacaysay Hay’adda UNDP ayaa booqasho ndho indhayn ah ku tegay qaybaha kala gadisan ee garoonka Diyaaradaha Burco si ay indhahooda ugu arkaan hawsha ka socota ,taasi oo uu xogwarana ka siiyay badhasaabka gobolka Togdheer Shir jaraa’id oo ay ku qabteen madasha nasashada madaarkaasi .
” Aad iyo aad ayaanu usoo dhaweynaynaa maamul’ahaan deeqda dhaqaale ee ay nasoo gaadhsiisay hay’adda UNDP ee ay dhismaha madaarka ugu talogashay oo qiimaheedu dhanyahay $ 69000 Doolar sidaa awgeed waxaanu leenahay hay’ada kale-na ha ku daydaan .
Waxaan kale oo aan idiin sheegaynaa sidaad indhihiina ku aragteen in hawsha dhismaha ee madaarku hada meel fiican marayso qaybo ka mid ahna dayactir lagu sameeyay sida xayndaabka garoonka dadka iyo xoolaha ka celiya ,waaney naga go’antahay dhamaystirkiisu ” ayuu badhasaabku yidhi.
Waxa kale oo isna halkaasi ka hadlay agaasimaha Wasaaradda duulista hawada Axmed Dalal Faarax waxaanu yidhi ” Anaga wasaarad ahaan waxaanu awooda saarayaa madaarka Burco in aanu kaalintayada ka qaadano dhismihiisa iyo dhamaystirkiisaba ,waayo madaarkani faa’ido weyn ayay shaqayntiisu ku soo kordhinayaa gobolka Togdheer iyo gobolada kale “.
Sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay Cabdilaahi Yuusuf oo ka mid ah saraakiisha Wasaaradda duulista hawada iyo Mr Stephen Herlis oo isaguna ka socday hay’adda UNDP ee dhaqaalaha madaarka ugu deeqday .
Dhismaha madaarka Burco ayaa mudo ku dhaw laba bilood socotay islamarkaana dhaqaalahan maanta la soo gaadhsiiyay ayaa noqonaaya kii u horeeyay ee ay hay’ad Caalami ahi ugu deeqdo.
Previous PostXukuumadda Somaliland Oo Joojisay Maraakiibtii ruqsada kalluumaysiga haystayNext Post‘Wasiirka Madaxtooyadu waa nin dhalinyaro ah, wuu muuqdaa, sababta oo ah shaqadiisa ayuu yaqaanaa’	Blog